15.03.2021	Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi 15	 - 24.01.2022	namhlanje
NgoMatshi 15, 2021 12:30 am - 14: 00
►a'21: Izisombululo zetekhnoloji kwezentlalo kwi-disinformation_amberPlatform Xa: Nge-15 kaMatshi ngo-2021 Ixesha: 12: 30-14: 00 :: NGALOKHU KUSENZEKA (EN) :: Ulwazi luchazwa ngokungazi kwaye emva koko lubangela ukungazi. Lo iya kuba ngumsebenzi wesemina apho izisombululo zeteknoloji yabantu kunye nokusikelwa umda kwabo ekuchaseni ulwazi malunga ne-disinformation ziya kuphononongwa. Isemina, eza kuvavanywa [...]
NgoMatshi 17, 2021 15:00 am - 17: 00
a'21: Ukoyisa ulwazi kunye nokungazi # 1: Indlela ebaluleke kakhulu kulwakhiwo lwezobuGcisa_Kounaktif
:: NGALO Mcimbi (EN / AR) :: Ukuchithwa kolwazi / ukungazi kuqala kuninzi, ucinga ngokwenethiwekhi, ukuhamba nokuqina. Inxulumene omnye nomnye ngokuthe tye ngaphaya kwawo nawaphi na amandla / ulwakhiwo lombutho. U-Abdeslam Ziou Ziou, umphandi kwezobugcisa, uzakuwuphatha lo mbandela kwi-prism yezobugcisa, ngokunika indlela yakhe kulawulo lobukoloniyali kwi [...]
NgoMatshi 18, 2021 15:00 am - 17: 00
a'21: Singazichaza njani imifanekiso kunye neAesthetics? - iKounaktif
►a'21: Ukucacisa ulwazi kunye nokungazi # 2: Singayichaza njani imifanekiso kunye neAesthetics? _Kounaktif Singayichaza njani i-cinema, kwaye singayifumana njani i-Oral Knowledge njengesixhobo sokumelana nekoloniyalizim. :: NGALO Mcimbi (EN / AR) :: Ukuchithwa kolwazi / ukungazi kuqala kuninzi, ucinga ngokwenethiwekhi, ukuhamba nokuqina. Ngu [...]
NgoMatshi 18, 2021 19:00 am
a'21: Ukususa ababukeleyo UDanielle Brathwaite-Shirley
► a'21: Ukususa ababukeli nje :: NGALOKHU KWEZIGANEKO (EN) :: Eli lizwe liyasivuza xa sijonge nje sithe cwaka. Umgca phakathi kokungasebenzi kunye nokusebenza kuvele kancinci. Asinakukwazi ukuhlawula abantu ukuba baphinde babukele. Izenzo zakho zineziphumo. Ukungabikho kwentshukumo kunemiphumo. Makhe sive ukuba ziziphi. [...]
NgoMatshi 19, 2021 15:00 am - 17: 00
a'21: Ukuchithwa kolwazi nge-Epistemology_Kounaktif
► "a'21: Ukupheliswa kolwazi kunye nokungazi # 3: Ukupheliswa kwenkqubo ye-Epistemology_Kounaktif :: NGALO Mcimbi (EN / AR / FR) :: Ukupheliswa kolwazi / ukungazi kuqala kwabaninzi, ucinga ngokwenethiwekhi, ukuhamba kunye nokuqina Inxulumene enye nenye ngokuthe tye ngaphaya kwawo nawaphi na amandla / ulwakhiwo lombutho.Seloua Luste Boulbina, ifilosofi, uyakuthetha ngeendlela zokwahlulahlula iiparadigms, kunye neendlela ezahlukeneyo [...]
NgoMatshi 20, 2021 15:00 am - 17: 00
a'21: Ukoyisa ulwazi kunye nokungazi # 4: Indlela enqamlezileyo yokwenza isigqibo kunye nobugcisa_Kounaktif
►a'21: Ukupheliswa kolwazi kunye nokungazi # 4: Indlela enqamlezileyo yokuphelisa ubukoloniyali kunye nezobuGcisa_Kounaktif :: NGOKU KWESI SIGANEKO (EN / AR) :: Ukuphelisa ulwazi / ukungazi kuqale kwabaninzi, ucinga ngokwenethiwekhi, ukuhamba kunye nokuqina . Inxulumene omnye nomnye ngokuthe tye ngaphaya kwawo nawaphi na amandla / ulwakhiwo lombutho. U-Lamyaâ Achary, umphandi kwezentlalo, uzakuveza indlela yabo [...]
NgoMatshi 30, 2021 10:00 am - 13: 00
:: NGALO MBALI (EN) :: I-Zen yePad.ma yingqokelela yezifundo ezifundiweyo, kunye nemibuzo ekuhlangatyezwene nayo, kwisithuba seminyaka elishumi sokusebenzisana kokubambisana kweeprojekthi. Baxhalabile yindlela ethekhnoloji yedijithali ehlala inxibelelene neendawo zabo ezilinganayo, zama ukulungisa ezinye ze - ezobuchwephesha, ezentlalo kunye nengqondo [...]
Epreli 5, 2021 13:00 - 16: 00	 Ukuqeshwa kothotho
a'21: ikharityhulam yemfundo yaseSudan_BAAB ngokudibeneyo
►a'21: ikharityhulam yemfundo yaseSudan_BAAB Ngokuhlangeneyo Lo msitho ujonge ukuqonda umlo oqhubekayo kude kube ngoku obusenzeka kwimidiya yoluntu, nakwimpilo yemihla ngemihla. Ingxoxo malunga nomxholo wekharityhulam yezemfundo emva kokutshintsha kolawulo lwangaphambili kunye nombuzo obalulekileyo wokulwa ukuba kutheni umfanekiso weNdalo ka-Adam "Michael [...]
Epreli 6, 2021 13:00 - 16: 00	 Ukuqeshwa kothotho
Epreli 18, 2021 19:00 - 20: 30
a'21: Ukhuseleko oluvela kwiArtificial Intelligence_amberPlatform
►a'21: Ukhuseleko oluvela kwiArtificial Intelligence_amberPlatform Singazikhusela njani kolu hlolo? Luhlobo luni lwesicelo sobukrelekrele bokuzenzela obusetyenziswa kwimicimbi yezentlalo? Singayithemba kangakanani ingqiqo eyenziweyo? Ngaba sinokumkhohlisa? :: NGALO Mcimbi (EN / TR) :: Ngaphandle kwezinto ezintle zobuchwephesha bobuchwephesha bobuchwephesha, obungene phantse kuyo yonke indawo [...]
Julayi 22, 2021 19:00 pm - 21: 00
* Kuthengisiwe * Ukufunda kunye no-Şeyda Kurt: Ukuthantamisa okukhulu-Kutheni uthando lwezopolitiko
Ukuthantamisa okukhulu-Kutheni uthando lwezopolitiko lwapapashwa ngo-Epreli 20, 2021 nguHarperCollins waseJamani. Yintoni uthando? Ngaba uthando luyintsingiselo yobomi, umanyano lwezopolitiko, yinkohliso okanye sisiphelo sodwa? Okanye akunakwenzeka kuba sityumke ngokupheleleyo phakathi koloyiko ngekamva, iimfuno ezigqithisileyo kunye nolwakhiwo olunocalucalulo? Umbhali u-Şeyda Kurt uphendula le mibuzo [...]
NgoSeptemba 12, 2021 16:00 PM - 17: 30	 Ukuqeshwa kothotho
NgoSeptemba 18, 2021 18:30 PM - 21: 00
Incoko yePhaneli: kunye no-Yelta Köm (umphathi), Asli Duru, Banu Çiçek Tülü, Yaşar Adnan Adanalı Iimo zokuPhila | Amava, ucelomngeni, ithemba Ngokugxila ngokukodwa ekuhlanganiseni, kumava asezidolophini, nakubemi, iphaneli inikezela ngegalelo elininzi [...]
NgoSeptemba 25, 2021 14:30 PM - 16: 00	 Ukuqeshwa kothotho
Nge-Okthobha 2, 2021 16:00 PM - 17: 30	 Ukuqeshwa kothotho
Ngaba ukuxhathisa okuchasene nobukoloniyali kunento yokwenza nengxaki yemozulu? Yintoni edibanisa imizabalazo echasene nobuhlanga kunye nomzabalazo wokulwa nokutshabalalisa indalo kunye nemozulu? Iprojekthi ye-BUNDjugend Locals United ikumema ngokuhlwa ngelizwi elithethiweyo, ukufunda kunye nomculo. Kwakhona kukho umculi wezibongo uSami El Poet, ababhali bencwadana ethi "Colonialism & Climate Crisis - Over 500 [...]
¿Cuáles permanecen a través del tiempo y no son appearances? Intersecciones y capas de archivos migratorios y de exilio que revelan otras miradas sobre la cultura de la memoria alemana y otra forma de habitar nuestras impresiones. ¿Pero qué más nos dicen estas kuvat ¿Qué esconden? ¿Quién ezo las photos? ¿Qué [...]
(Jonga ukuguqulelwa kwesiJamani ngezantsi) NgoNovemba 13th i-Vierte Welle Film Festival iya kuzisa udidi olutsha: #niunamenos. "I-Vierte Welle Film Festival" iquka kwiimveliso ze-audiovisual zeprogram ezenziwe ngokukodwa ngabasetyhini bento ebizwa ngokuba yi-Fourth-wave feminism. Injongo yomthendeleko kukubonelela ngokubonakala kwabaculi ababhinqileyo kunye nokunceda ukuphakamisa ulwazi [...]
Ngomhla we-13.11 kuNovemba Kwi-2021 i-7th edition ye-Woka Kuma Festival kubugcisa kunye nenkcubeko evela eBurkina Faso iya kwenzeka. → Ukwamkelwa: ukusuka ngo-19.30 ebusuku IV, uncedo loluntu, ukhuseleko olusisiseko okanye ngokoMthetho wamaBhenefithi aBafuna indawo yokuKhuselwa). *** [...]
Imibhalo-ngqangi yomzimba wangaphandle (s) isiganeko sephaneli yovavanyo olubonakalayo, ethatha iifom zokubonakaliswa kwamabali ukuba imizimba ye-Queer & Trans * yombala ibambe njengendlela yokuphila, ukusuka kwintlungu ukuya kwimeko yokuqina njengomjikelo, ukuya phakathi. Imibhalo-ngqangi yoMzimba waNgaphandle (s) yiprojekthi ebaluleke kakhulu ebonwayo esekwe kwindibano yocweyo eyenziwe ngu-Ahmad B َ ab َ a (igcisa lamaqela ahlukeneyo) kunye [...]